လက်သည်းခွံ ပေါ်က ပြောပြ နေတဲ့သင့်ကျန်းမာရေးအ ကြောင်း… – Trend.com.mm
လက်သည်းခွံ ပေါ်က ပြောပြ နေတဲ့သင့်ကျန်းမာရေးအ ကြောင်း…
Posted on April 27, 2019 April 26, 2019 by Shun Lei Phyo
လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်သည်းခွံက နေဒီလူရဲ့ကျန်းမာ ရေးအ ခြေ နေကို အနည်းနဲ့များခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတာ သင်တို့သိကြလား? တစ်ချို့ တွေက တော့သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ရပင်မဲ့ မသိေ သးသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ပြော ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်…
လက်သည်းခွံချင်းတူပင်မဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပုံစံချင်းကွာခြားတတ်ကြပါတယ်။ လက်သည်းခွံ လေးတွေက ဖြူပြီးသွေးပြည့် ရောင်သမ်းနေရင် ဒီလူရဲ့ကျန်းမာရေးက တော်တော်ကောင်းပြီးအားရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
ပန်းရောင်သမ်းမ နေပဲ ၀ါကြန့်ကြန့်အ ရောင်ဖြစ်နေရင်တော့ ဓာတ်တော်တော်များများချို့ ယွင်းနေပြီဆိုတာ ကို သတိထားမိပါစေ။ နီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဘာအားဆေးတွေလိုသလဲ ဘယ်လိုေ တွစားသုံးသင့်သလဲ မေးမြန်းကြည့်ပါ။
နောက်တစ်ခုက လက်သည်းခွံရဲ့ အောက်ဖက်နားမှာ ဂပုံ အခုံး လေးပါမပါကိစ္စပါပဲ။ ဂ ပုံ အခုံးလေးက ကြီးကြီးမားမားနဲ့လက်ချောင်းတိုင်းလိုလိုပါမယ်ဆိုရင် ဒီလူရဲ့အတွင်းကလီစာတွေဟာ ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကို ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ လက်သည်းခွံမှာ ဂ ပုံ ကွေးလေးတွေမပါပဲ နည်းပါးနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာ နည်းနည်းတော့ရောဂါရှိနေပါပြီ။ ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ရင်တော့ ကလီစာတစ်ခုခု အားနည်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူတဈယောကျရဲ့လကျသညျးခှံက နဒေီလူရဲ့ကနျြးမာ ရေးအ ခွေ နကေို အနညျးနဲ့မြားခနျ့မှနျးလို့ရတယျဆိုတာ သငျတို့သိကွလား? တဈခြို့ တှေက တော့သိပွီးသားဖွဈမယျထငျရပငျမဲ့ မသိေ သးသူတဈဦးတဈယောကျအတှကျရညျရှယျပွီး ပွော ပွ ပေးလိုကျပါတယျ…လကျသညျးခှံခငျြးတူပငျမဲ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပုံစံခငျြးကှာခွားတတျကွပါတယျ။ လကျသညျးခှံ လေးတှကေ ဖွူပွီးသှေးပွညျ့ ရောငျသမျးနရေငျ ဒီလူရဲ့ကနျြးမာရေးက တျောတျောကောငျးပွီးအားရှိတဲ့လူတဈယောကျလို့သတျမှတျလို့ရပါတယျ။ပနျးရောငျသမျးမ နပေဲ ၀ါကွနျ့ကွနျ့အ ရောငျဖွဈနရေငျတော့ ဓာတျတျောတျောမြားမြားခြို့ ယှငျးနပွေီဆိုတာ ကို သတိထားမိပါစေ။ နီးစပျရာဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး ဘာအားဆေးတှေလိုသလဲ ဘယျလိုေ တှစားသုံးသငျ့သလဲ မေးမွနျးကွညျ့ပါ။နောကျတဈခုက လကျသညျးခှံရဲ့ အောကျဖကျနားမှာ ဂပုံ အခုံး လေးပါမပါကိစ်စပါပဲ။ ဂ ပုံ အခုံးလေးက ကွီးကွီးမားမားနဲ့လကျခြောငျးတိုငျးလိုလိုပါမယျဆိုရငျ ဒီလူရဲ့အတှငျးကလီစာတှေဟာ ကောငျးမှနျနတေယျဆိုတဲ့လက်ခဏာကို ပွတယျလို့ဆိုပါတယျ။ဒီလိုမဟုတျပဲ လကျသညျးခှံမှာ ဂ ပုံ ကှေးလေးတှေမပါပဲ နညျးပါးနပွေီဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးမှာ နညျးနညျးတော့ရောဂါရှိနပေါပွီ။ ကွီးကွီးမားမားမဟုတျရငျတော့ ကလီစာတဈခုခု အားနညျးတာမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ပင်လယ်ကမ်းခြေ သွားမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ခဲ့ဖို့ မ မေ့နဲ့နော်…